Alpha-Linolenic Acid (အဲလ်ဖာ-လီနိုလန်းနင့် အက်စစ်) - Hello Sayarwon
Alpha-Linolenic Acid (အဲလ်ဖာ-လီနိုလန်းနင့် အက်စစ်)
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Alpha-Linolenic Acid (အဲလ်ဖာ-လီနိုလန်းနင့် အက်စစ်)
Alpha-Linolenic Acid (အဲလ်ဖာ-လီနိုလန်းနင့် အက်စစ်) ကဘာလဲ။
အဲလ်ဖာ-လီနိုလန်းနင့် အက်စစ် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Alpha-Linolenic Acid သာ အပင်တွေမှာပါတဲပ omega3fatty acid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို flaxseed oil, canola oil, soy, perilla နဲ့ walnut oil တွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။
Alpha-Linolenic Acid ဟာ အောက်ပါအခြေအနေတွေအတွက် လူသိများပါတယ်။
Psoriasis နဲ့ eczema လိုမျိုး ဓါတ်မတည့်ခြင်းနဲ့ ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော အရေပြား ရောဂါများ
Alpha-Linolenic Acid ကို အခြားအခြေအနေတွေအတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကို ပိုမိုသိရှိဖို့ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Alpha-Linolenic Acid ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေ့လာမှုအချို့က အောက်ပါအချက်တွေကို ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုက Alpha-Linolenic Acid ကို အစားအသောက်မှာ များပြားစွာ စားသောက်သူတွေဟာ သေစေနိုင်တဲ့ နှလုံးရပ်ခြင်းမျိုးဖြစ်နှုန်းနည်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခြား လေ့လာမှု တစ်ခုကတော့ Alpha-Linolenic Acid ပမာဏ များပြားစွာ စားသုံးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ Alpha-Linolenic Acid နည်းနည်းသာ စားသုံးသူတွေထက် ရုတ်တရက် နှလုံးရပ်သေဆုံးနှုန်း ၄၆% ပိုများတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခြား လေ့လာမှုတစ်ခုကတော့ Alpha-Linolenic Acid ကို ပိုစားတဲ့သူတွေမှာ နှလုံးရောဂါကြောင့် သေနိုင်ခြေ လျော့နည်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုက Alpha-Linolenic Acid များပြားစွာ စားခြင်းဟာ သွေးပေါင်တက်နှုန်းကို ၃၀% လျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လေ့လာမှုတစ်ခုက Alpha-Linolenic Acid ဟာ ရောင်ရမ်းခြင်းကို လျော့ကျစေပြီး ပန်းနာရင်ကျပ်ရှိသူတွေမှာ အဆုတ်လုပ်ငန်းဆောင်တာ တိုးတက်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲလ်ဖာ-လီနိုလန်းနင့် အက်စစ် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Alpha-Linolenic Acid နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆေးတွေ၊ အခြားဆေးတွေ၊ အခြား herbal တွေနဲ့ မတည့်ရင်။
အဲလ်ဖာ-လီနိုလန်းနင့် အက်စစ် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
အဲလ်ဖာ-လီနိုလန်းနင့် အက်စစ် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Alpha-Linolenic Acid ကနေ အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Alpha-Linolenic Acid ကို အစာမှာထည့်စားတဲ့ ပမာဏလောက်အသုံးပြုရင် လူကြီးတွေမှာ စိတ်ချရပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စိုးရိမ်မှုတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အဲလ်ဖာ-လီနိုလန်းနင့် အက်စစ် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
Alpha-Linolenic Acid ဟာ သင်အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
အချို့ဆေးတွေဟာ Alpha-Linolenic Acid နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။
သွေးကြဲဆေးတွေဖြစ်တဲ့ warfarin (Coumadin), clopidogrel (Plavix), နဲ့ aspirin
ကိုလက်စထရောကျဆေးတွေဖြစ်တဲ့ Atorvastatin (Lipitor), Rosuvastatin (Crestor), Fluvastatin (Lescol), Lovastatin (Mevacor), Simvastatin (Zocor), and Pravastatin (Pravachol)
အဲလ်ဖာ-လီနိုလန်းနင့် အက်စစ် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
အမေက ကျန်းမာစွာ စားသောက်ရင် နို့တိုက်ကလေးငယ်တွေမှာ Alpha-Linolenic Acid ပမာဏ လုံလောက်စွာ ရနိုင်ပါတယ်။
Infant formula မှာ Alpha-Linolenic Acid ပါသင့်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေဟာ ဖြည့်စွက်စာ စားဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
အကြံပြုထားတဲ့ ပမာဏကတော့ နေ့စဉ် ၁-၂ ဂရမ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါနဲ့ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ နှလုံးရပ်ခြင်းတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်တော့ တစ်နေ့ကို ပျမ်းမျှ ၁.၂-၂ ဂရမ် အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
နှလုံးနောက်တစ်ခေါက် ရပ်ခြင်း (သို့) နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါရှိသူတွေမှာ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် တစ်နေ့ကို ၁.၆ ဂရမ် အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
Alpha-Linolenic Acid ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
အဲလ်ဖာ-လီနိုလန်းနင့် အက်စစ် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Alpha-Linolenic Acid ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဟင်းချက်ဆီ (canola oil, soybean oil, medicinal oil, flaxseed oil)
Flaxseed oil ပါဝင်တဲ့ ဖြည့်စွက်စာများ
Alpha-Linolenic Acid. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-1035-alpha-linolenic%20acid.aspx?activeingredientid=1035&activeingredientname=alpha-linolenic%20acid. Accessed March 11, 2017.
Alpha-Linolenic Acid. http://umm.edu/health/medical/altmed/supplement/alphalinolenic-acid. Accessed March 11, 2017.
ကုလားပဲ စားသုံးပေးရင် ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်မလဲ
လေ့ကျင့်ခန်းကို မနက်ခင်း ဒါမှမဟုတ် ညနေဘက်မှာ လုပ်မလား